1 Samuel 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 13:1-23
Saul paw asraafo (1-4)
Ahantan maa Saul yɛɛ biribi a ɛnsɛ sɛ ɔyɛ (5-9)
Samuel kasa kyerɛɛ Saul (10-14)
Ná Israelfo nni akode (15-23)
13 Saul bedii hene no,+ na wadi mfe . . . ,* na odii Israel so hene mfe abien. 2 Saul paw mmarima 3,000 fii Israelfo mu; ná wɔn mu 2,000 ka Saul ho wɔ Mikmas ne Betel mmepɔw mu, na 1,000 nso kɔkaa Yonatan+ ho wɔ Benyaminfo kurow Gibea+ mu. Asraafo a wɔaka no de, ogyaa wɔn kwan ma obiara kɔɔ ne ntamadan mu. 3 Yonatan kunkum Filistifo+ asraafodɔm a wɔwɔ Geba+ no, na Filistifo no tee. Ɛnna Saul ma wɔbɔɔ abɛn+ wɔ asaase no nyinaa so kae sɛ: “Hebrifo, muntie!” 4 Asɛm a Israel nyinaa tee ne sɛ: “Saul akunkum Filistifo asraafodɔm, na seesei Israel ho abɔn Filistifo no.” Enti wɔfrɛfrɛɛ ɔman no sɛ wommedi Saul akyi wɔ Gilgal.+ 5 Filistifo no nso boaboaa wɔn ho ano sɛ wɔne Israelfo rebɛko; wɔde nteaseɛnam 30,000 ne nnipa 6,000 a wɔtete apɔnkɔ so, ne nnipa a wɔdɔɔso te sɛ mpoano anwea bae,+ na wɔforo kɔboaa wɔn ho ano wɔ Mikmas wɔ Bet-Awen+ apuei fam. 6 Na Israel mmarima hui sɛ wɔn ho akyere wɔn, efisɛ na nea ɛreba no ani soso. Enti ɔman no guan kohintaw abodan,+ amoa, abotan, ntokuru ne nsubura mu. 7 Hebrifo no bi mpo twaa Yordan kɔɔ Gad ne Gilead asaase so.+ Saul de, na ɔda so wɔ Gilgal, na nnipa a na wodi n’akyi nyinaa ho popoe. 8 Ɔtwɛn nnanson sɛnea Samuel kae* no, nanso Samuel amma Gilgal, na na ɔmanfo no refi ne nkyɛn nkakrankakra. 9 Afei Saul kae sɛ: “Momfa ɔhyew afɔrebɔde ne asomdwoe afɔrebɔde no mmrɛ me.” Na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre no.+ 10 Nanso bere a ɔbɔɔ ɔhyew afɔre no wiei ara pɛ na Samuel bedui. Enti Saul fii adi sɛ ɔrekohyia no ahyira no. 11 Ɛnna Samuel bisae sɛ: “Dɛn na woayɛ yi?” Saul buae sɛ: “Mihui sɛ ɔmanfo no refi me nkyɛn,+ na wo nso bere a wohyɛe no, woanni so. Afei nso, na Filistifo no reboaboa wɔn ho ano wɔ Mikmas.+ 12 Enti meka kyerɛɛ me ho sɛ, ‘Filistifo yi besian aba me so wɔ Gilgal, nanso menhwehwɛɛ Yehowa nhyira.’* Ɛbaa saa no, mebɔɔ ɔhyew afɔre no.” 13 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Woadi nkwaseasɛm. Mmara nsɛm a Yehowa, wo Nyankopɔn de maa wo no, woanni so.+ Sɛ wudii so a, anka Yehowa bɛma w’ahenni atim afebɔɔ wɔ Israel. 14 Nanso seesei de, w’ahenni renkyɛ.+ Yehowa bɛhwehwɛ ɔbarima a ɔyɛ nea Yehowa koma pɛ,+ na ɔbɛyɛ no ɔkannifo wɔ ne man so,+ efisɛ woanyɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ wo no.”+ 15 Afei Samuel sɔre siim fii Gilgal kɔɔ Benyaminfo kurow Gibea mu, na Saul kan ɔmanfo no; wɔn a na wɔda so ka ne ho no, na wɔn dodow bɛyɛ mmarima 600.+ 16 Saul ne ne ba Yonatan ne wɔn a wɔda so ka wɔn ho no, na wɔwɔ Benyaminfo kurow Geba+ mu. Filistifo no nso boaboaa wɔn ho ano wɔ Mikmas.+ 17 Ná asraafo akuw abiɛsa taa fi Filistifo asoɛe hɔ ba. Kuw baako fa Ofra kwan so kɔ Sual asaase so, 18 kuw foforo nso de wɔn ani kyerɛ Bet-Horon+ kwan so, na kuw a ɛto so abiɛsa no nso de wɔn ani kyerɛ sare so, ɔkwan a ɛne Seboim bon no bɔ hye no so. 19 Ná ɔtomfo biara nni Israel asaase so baabiara, efisɛ Filistifo no kae sɛ: “Yɛmpɛ sɛ Hebrifo no bɛyɛ sekan anaa peaw biara.” 20 Enti sɛ Israelni biara pɛ sɛ ɔsew n’asɔw, ne sosɔw, n’abonnua, ne ne kantankrankyi* ano a, gye sɛ osian kɔ Filistifo mu. 21 Sɛ wɔsew asɔw, ɔsosɔw, adinam a ano yɛ abiɛsa, abonnua, anaasɛ wosiesie poma a wɔde ka nantwi a, wogye pim* baako. 22 Sɛ ɔko du so a, obiara nni ɔman no mu a ɔka Saul ne Yonatan ho a onya sekan anaa peaw kura; Saul ne ne ba Yonatan nko ara na na wɔwɔ akode.+ 23 Ná Filistifo de asraafodɔm akogu baabi a wɔfa twa Mikmas+ bon no.
^ Mfe dodow no ampue wɔ tete Hebri nsaano nkyerɛwee no mu.
^ Anaa “hyɛe.”
^ Anaa “menhwehwɛɛ Yehowa anim dom.”
^ Pim yɛ tete sika bi a emu duru bɛyɛ gram 8.